दसैँमा कात्तिक ७-११ गतेसम्म सबै वाणिज्य बैंक बन्द हुने, एटीएम भने खुला रहने Bizshala -
दसैँमा कात्तिक ७-११ गतेसम्म सबै वाणिज्य बैंक बन्द हुने, एटीएम भने खुला रहने
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरुले दसैँ बिदामा आफ्ना शाखाहरु नखोल्ने भएका छन्।
गत वर्ष बडादसैँका बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर खोलेर सेवा प्रवाह गरेका बैंकले यस वर्ष कुनै पनि बैंक नखोल्ने निर्णय गरेका हुन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सीमित शाखा खोलेर बैकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले नखोल्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले तोकिएअनुसार यही कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म पाँच दिन सबै वाणिज्य बैंकका शाखा बन्द गर्ने निर्णय भएको सुनाए। ‘दसैँमा कम आवतजावत हुन्छ, सीमित बैंकमात्र खुला गर्दा बढी भीडभाड हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अधिकांश बैंकका कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमणको जोखिम लिनुभन्दा पाँच दिन बन्द गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित बन्द गरिएको हो।’
हाल बैंकहरुले एटिएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले यस पटक डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरी शाखा खोलेर दिने सेवालाई बन्द गरिएको बताएका छन्। दसैँका समयमा वाणिज्य बैंक बन्द गर्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने राष्ट्र बैंक, नियमन विभागका प्रमुख देवकुमारमा ढकाल बताउँछन्।
सामान्यतया राष्ट्र बैंक खुल्ने दिन र समय बैंकबाट नियमन हुने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुला हुनुपर्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनिवार्य रुपमा खुला गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था नभएको उनको जिकिर छ।
बजारमा शंकास्पद लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै पत्र आएपछि नेप्सेको प्रतिक्रिया-'बोर्डको केटाकेटी पारा'
नेपाल एसबीआई बैंकका ग्राहकले डा लाल प्याथल्याबमा सेवा लिँदा १५%सम्म छुट पाउने
सनराइज बैंकले सानीभेरी गाउँपालिकामा कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने
नबिल बैंक र वान टु वाचबीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहयोग गर्न सहकार्य
जावलाखेलमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ सर्भिस आउटलेट
अबदेखि अन्तरबैंक एटीएम प्रयोगमा शुल्क लाग्ने
काठमाण्डौ । अबदेखि अन्तबैंक एटीएम प्रयोग गरी पैसा निकाल्दा शुल्क...
लघुवित्तमध्ये ११ कम्पनीले गरे लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृतमध्ये ११ वटा...
बैंकबीचको कर्जा खोसाखोस रोक्ने राष्ट्रबैंकको अस्त्र, स्वाप
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम...
स्थिर ब्याजदर सम्बन्धी नीति संसोधन हुने, राष्ट्रबैंक एक कदम
काठमाण्डौ । व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको अवधिभर स्थिर ब्याजदर कायम...
काठमाण्डौ । कोभिड प्रभावित ऋणिहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले ६...
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतको ब्याजदर घटाएर न्यून...
कर्जा प्रवाहको गति बढ्यो, गभर्नर भन्छन्: गति यस्तै रहे तरलता
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले...
हालसम्म कतिवटा वाणिज्य बैंकले गरे लाभांश घोषणा ? कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले १३ वटाले...